တချို့သောအရာတွေကို မမြင်သလို နေလိုက်ပါ
တချို့သောအရာတွေကို မမြင်သလို နေလိုက်ပါ ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက မြို့တစ်မြို့မှာ ကြက်တူရွေးချစ်တတ်တဲ့ ပုဏ္ဏားကြီးတစ်ယောက် ရှိတယ်.သူ့ဆီမှာအင်မတန်မှချစ်စရာကောင်းပြီး စ ကား အလွန်တတ်တဲ့ ကြက်တူရွေးလေး နှစ်ကောင်ရှိသတဲ့. ပုဏ္ဏားကြီးဟာ ကြက်တူရွေးလေး ၂ကောင်ကို အင်မတန်မှချစ်မြတ်နိုးတာကြောင့် သားသမီးအရင်းပမာဆက်ဆံတယ် .တနေ့တော့ပုဏ္ဏားကြီးဟာအခြားမြို့တစ်မြို့ကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ညအိပ် ခရီးထွက်ဖို့ အကြောင်းပေါ်လာတယ် ပုဏ္ဏားကြီးဟာ ခရီးထွက်ခါနီးမှာ ကြက်တူရွေး ညီနောင်ကို ပုဏ္ဏားမကြီး အားစောင့်ကြည့်ဖို့ မှာကြားခဲ့တယ်။အဲလိုနဲ့ ပုဏ္ဏားကြီးခရီးထွက်သွားပြီးမကြာခင်မှာ ပုဏ္ဏားမကြီးဟာ သူ့ရဲ့ လင်ငယ်နဲ့ဖောက်ပြန်ပါတော့ တယ် ဒီအကြောင်းကိုသိတဲ့ကြက်တူရွေးညီနောင်ထဲမှ အ ငယ်ကောင်က ” သခင်မကြီး သင်သည် ပုဏ္ဏားကြီး ပေါ်တွင်သစ္စာဖောက်လေပြီ.ဤအကြောင်းအား ပုဏ္ဏားကြီး ပြန်လာက ငါတိုင်လတ္တံ ” လို့ပုဏ္ဏားမကြီးကို လှမ်းပြောတယ်. ထိုအခါပုဏ္ဏားမကြီးက” …
ဦးဆိုတဲ့ ခေါ်သံကြားရင် အခုထိ ကြက်သီးဖြန်းဖြန်း ထတုန်းဆိုတဲ့ ဦးလေးကြီးရဲ့အဖြစ် ဦးဆိုရင် ကြောက်နေရသည် …. ဖုန်းဝင်လာလို့ ကောက်ကိုင် လိုက်တာ ဖေ့ဘုတ် ပေါ် မှာ မနေ့ကမှ ချစ်သူ ဖြစ်သွားတဲ့ ခေးလေးရဲ့ ဖုန်းဖြစ်နေတော့ ကျုပ် ပျော် သွားတယ်။ “ဦး” “ပြော ခလိန်း” “ဦး ပျော်လို့ရပြီ သိလား” ချိန်းတွေ့ တော့မယ် ထင်တယ်လို့ တွေး မိပြီး ကျုပ် ပီတိတွေ ဖျာနေ မိတယ် ။ “အွန်း ဘာလို့လဲ” “ခလိန်းမှာ ဦးနဲ့ရတဲ့ ကိုယ်ဝန် ရှိနေပြီလေ” “ဖူးးးးးး ” သောက်နေတဲ့ …
စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါ မုဆိုးတစ်ဦးလို ကျင့်ကြံပါ တစ်ခါက စီးပွားရေးလုပ်ရတာအဆင်မပြေလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ထိုစိတ်ညစ်မှုတွေကို ဖြေဖြောက်ဖို့ သူ့အိမ်ရဲ့ မနီးမဝေးမှာရှိတဲ့ တောအုပ်လေးနားက စမ်းချောင်းလေးဘေးမှာ အေးအေးဆေးဆေး စိတ်ဖြေရင်း နည်းလမ်းသစ်တွေကို စဉ်းစားနေခဲ့တယ်။ အဲ့လိုနေ့စဉ် ထိုင်စဉ်းစားနေခဲ့တဲ့ နေ့ရက်တိုင်းမှာ သူ့နံဘေးကနေ မုဆိုးကြီးတစ်ဦးက တောကောင်တွေ တစ်နေ့တစ်မျိုး ရ,ရလာကာ ဖြတ်သွားလေ့ရှိတာကို သတိထားမိတယ်။ဒါနဲ့တစ်ရက်တော့ ဗဟုသုတလည်းရအောင်ဆိုကာ မုဆိုးကြီးကို သားကောင်တွေ တစ်နေ့တစ်မျိုး ဘယ်လိုရအောင်လုပ်လဲ မေးကြည့်ခဲ့တယ်။ မုဆိုးကြီးကလည်း အသက်ဝါကြီးသူဆိုတော့ ‌လူ့လောကရဲ့ အတွေ့အကြုံများ အတော်အသင့်ရှိနေခဲ့ပြီ။ဒါကြောင့် လူငယ်လေး စကားပြောတဲ့အခါမှာ “ငါလည်း မင်းကို သတိထားမိပါတယ်။ဘာကြောင့် ဒီနေရာမှာ လာလာပြီး ထိုင်နေတာလဲလို့” ပြန်မေးတယ်။ ထိုအခါ လူငယ်ဟာ စီးပွားရေးလုပ်ရတာ အဆင်မပြေကြောင်း …
ရွှေအတုအစစ် အလွယ်ခွဲခြားနည်း (၄)မျိုး
ရွှေအတုအစစ် အလွယ်ခွဲခြားနည်း (၄)မျိုး ရွှေကိုအတုလားအစစ်လားဆိုတာအမြင်နဲ့အလွယ်တကူ ဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူး ဗဟုသုတရစေရန်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်..။ သံလိုက်ကိုအသုံးပြုစမ်းသပ်ခြင်း – သံလိုက်ကိုအသုံးပြုပြီးစမ်းသပ်တဲ့အခါရွှေအစစ်ဆိုရင် သံလိုက်နဲ့ ကပ်ပါလာခြင်းမျိုးမရှိဘဲ ရွှေအတုဆိုရင် သတ္တုပါဝင်တဲ့အတွက် သံလိုက်နဲ့ ကပ်ပါလာတာကို ကြည့်ပြီး ခွဲခြားပေးနိုင်ပါတယ်။ ရေကိုအသုံးပြုစမ်းသပ်ခြင်း – ရေဖြည့်ထားတဲ့ဖန်ခွက်ထဲသို့ ရွှေကိုနစ်ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါစစ်မှန်တဲ့ရွှေဟာ သိပ်သည်းဆများတဲ့သတ္တုဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ရေထဲသို့ချက်ခြင်း နစ်မြုပ်သွားတာတွေ့ရမှာပါ ရေပေါ်ပေါလောပေါ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ရွှေအစစ်မဟုတ်ကြောင်း သိရှိနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုသတိထားရမှာကတော့သိပ်သည်းဆများတဲ့ သတ္တုကို အသုံးပြုထားမယ်ဆိုရင်တော့နစ်မြုပ်သွားနိုင်တာမို့ရေကိုအသုံးပြုစမ်းသပ်တဲ့အခါအထူးသတိပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်ရှင့်..။ ရှာလကာရည်ကိုအသုံးပြုစမ်းသပ်ခြင်း – မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ ရှာလကာရည်ကို အသုံးပြုပြီးတော့လည်း ရွှေအတုနဲ့အစစ်ကို လွယ်လွယ်ကူကူ ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမယ့် ရွှေကို ရှာလကာရည်နဲ့ ထိတွေ့ လိုက်တဲ့အချိန်မှာ အရောင်ပြောင်းသွားခြင်းမျိုးမရှိရင်တော့ ရွှေအစစ် ဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်ပါတယ်။ အရောင်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုရင်တော့ …
လူတစ်ယောက်ကို ဆွဲဆောင်တဲ့နေရာမှာ အရေးကြီးတဲ့အချက်
လူတစ်ယောက်ကို ဆွဲဆောင်တဲ့နေရာမှာ အရေးကြီးတဲ့အချက် ကိုယ်ဟန် အမူအရာဟာ လူတစ်ယောက်ကို ဆွဲဆောင်တဲ့ နေရာမှာ အင်မတန် အရေးကြီးတဲ့ အရာပါ ။ ချစ်ရေးချစ်ရာ ကိစ္စတွေမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူမှုဆက်ဆံရေး မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ဟန် အမူအရာဟာ သိပ် အရေးကြီးပါတယ် ။ များသော အားဖြင့် လူတွေက Relationship တစ်ခု စတင်တော့မယ် ဆိုရင် ” ငါတို့ နှစ်ယောက် ဆက်ဆံရေး ဘာလို့ အဆင်မပြေတာလဲ ” ” ငါ့ကို သဘောကျရဲ့လား မသိဘူး ” “ဘာလို့ ငါ့ကို ဖုန်းမဆက်တာလဲ ” ..အစ ရှိသဖြင့် မေးခွန်းများစွာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မေးပြီး …
ဖုန်းသုံးတဲ့အခါ လူတိုင်း လုပ်မိတတ်တဲ့ မကောင်းတဲ့ အမှား (၅)ခု ဖုန်းတွေဟာ လူတွေနဲ့ အမြဲတမ်းအတူရှိတဲ့ အဖော်တစ်ယောက်လို ဖြစ်နေပါပြီ။ လူအချင်းချင်းတောင်မှ လူကောင်းလူဆိုး ခွဲခြားပေါင်းရသေးတာပဲ။ ဒီတော့ ၂၄ နာရီနီးပါး အနားအမြဲရှိနေတဲ့ ဖုန်းရဲ့ ကောင်းတဲ့ဆိုးတဲ့အချက်လေးတွေကို မှတ်သားထားပြီး ကိုယ့်အတွက်မကောင်းတဲ့ အချက်တွေကို မလုပ်မိစေဖို့ သတိထားဆင်ခြင်ကြရအောင်နော် (၁) ဖုန်းနဲ့အတူအိပ်ခြင်း=ဖုန်းဆိုတာဟာ အခြေခံအားဖြင့် လျှပ်စီးသံလိုက်စက်ကွင်းတွေကို ကူးပြောင်းပေးတဲ့၊ လက်ခံပေးတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက ဖုန်းကနေ ရေဒီယိုလှိုင်းတွေထွက်ပါတယ်။ ရေဒီယိုလှိုင်းတွေနဲ့ အချိန်ကြာထိတွေ့ခြင်းက ဦးနှောက်ကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ဆိုပါတယ်။ နောက်ပြီး ဖုန်းကိုအနားမှာထားအိပ်တဲ့အခါ ဖုန်းမက်ဆေ့စ်ပဲဖြစ်ဖြစ် Noti တက်လာတဲ့အခါ ဦးနှောက်က နိုးထသွားပြီး အိပ်စက်ခြင်းစက်ဝန်းကို …
နှာရည်ကျ၊နှပ်တရှုံ့ရှုံ့ဖြစ်နေခဲ့လျှင် ဆားငွေ့ရှူနည်း…. တစ်ဆောင်းတွင်းလုံးနှာစေးနေခဲ့ရင်။ လူရှေ့သူရှေ့မရှောင်နှာရည်ကျ၊နှပ်တရှုံ့ရှုံ့ဖြစ်နေခဲ့ရင်အလွယ်တကူစနဲ့၊ သက်သာစေနိုင်တဲ့နည်းလမ်းကတော့ဆားငွေ့ရှူတဲ့နည်းပါဘဲ။ ငွေမကုန်ပဲသက်သာစေမဲ့ မီးဖိုချောင်ကဆေးနည်းလေးပါ။ ပြုလုပ်ပုံကတော့ ဟင်းရည်သောက်ကြွေပန်းကန်လုံးထဲမှာပရုပ်ဆီအနည်းငယ်သုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်ဆား၊ဟင်းစားဇွန်းနဲ့၃ဇွန်းထည့်ပါ။ ဆူပြီးသားရေနွေးသို့မဟုတ်ဓာတ်ဘူးထဲကရေနွေးပူပူလောင်းထည့်ပါ။ တက်လာတဲ့ ဆားအငွေ့ကို ဦးခေါင်းမှာတဘက်ပုဝါတစ်ထည်ခြုံပြီးကြွေပန်းကန်ထဲကတက်လာတဲ့အငွေ့ကိုရှူပေးပါ။ သေချာအငွေ့နှာခေါင်းထဲရောက်အောင်ရှူပေးပါ ပင်လယ်ထဲကဆားငွေ့လေရှူ သလိုမျိုးအကျိုးခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ဆားငွေ့ဟာအဆုတ်ကျန်းမာရေးကိုကောင်းစေပါတယ်။ နှာစေးတဲ့အရည်ထွက်ကျခြင်းကိုလည်းထိန်းစေပါတယ်။ လေရှူပြွန်ရောင်ခြင်းကိုလည်းသက်သာစေတဲ့အပြင်ပိုးများကပ်တွယ်ပေါက်ဖွားခြင်းမှလည်းဟန့်တားကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကျနည်းပြီးဆေးရုံဆေးခန်းသွားစရာမလိုဘဲဒီနည်းကိုနေ့စဉ်မှန်မှန်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်အဆုတ်အအေးပတ်နှာစေး။ ထိပ်ကပ်နာဖြစ်ခြင်များမှကာကွယ်ပေးနိုင်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ လေဖြတ်ပြီးအိပ်ယာထဲလှဲနေရတဲ့မိဘများကိုလည်း ဒီနည်းဖြင့်၊ ဆားငွေ့ရှူပေးခြင်းဖြင့် အဆုပ်ပွ၊ ချွဲဆိုက်ခြင်းဘေးမှကာကွယ်စေနိုင်ပါတယ်။ လေဖြတ်သူများကိုအင်္ဂလိပ်ဆေးတိုက်ရုံနဲ့ပစ်မထားကြပါနဲ့။ သူတို့အဆုတ်မပွအောင်ဂရုစိုက်ကြပါ။ ဆားငွေ့ရှူပေးပါ၊ မနက်နေရောင်ခြည်လည်းပြပေးပါ။ Crd Zawgyi ႏွာရည္က်၊ႏွပ္တရႈံ႕ရႈံ႕ျဖစ္ေနခဲ့လွ်င္ ဆားေငြ႕ရႉနည္း…. တစ္ေဆာင္းတြင္းလုံးႏွာေစးေနခဲ့ရင္။ လူေရွ႕သူေရွ႕မေရွာင္ႏွာရည္က်၊ႏွပ္တရႈံ႕ရႈံ႕ျဖစ္ေနခဲ့ရင္အလြယ္တကူစနဲ႔၊ သက္သာေစႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းကေတာ့ဆားေငြ႕ရႉတဲ့နည္းပါဘဲ။ ေငြမကုန္ပဲသက္သာေစမဲ့ မီးဖိုေခ်ာင္ကေဆးနည္းေလးပါ။ ျပဳလုပ္ပုံကေတာ့ ဟင္းရည္ေသာက္ေႂကြပန္းကန္လုံးထဲမွာပ႐ုပ္ဆီအနည္းငယ္သုပ္လိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ဆား၊ဟင္းစားဇြန္းနဲ႔၃ဇြန္းထည့္ပါ။ ဆူၿပီးသားေရေႏြးသို႔မဟုတ္ဓာတ္ဘူးထဲကေရေႏြးပူပူေလာင္းထည့္ပါ။ တက္လာတဲ့ ဆားအေငြ႕ကို ဦးေခါင္းမွာတဘက္ပုဝါတစ္ထည္ၿခဳံၿပီးေႂကြပန္းကန္ထဲကတက္လာတဲ့အေငြ႕ကိုရႉေပးပါ။ ေသခ်ာအေငြ႕ႏွာေခါင္းထဲေရာက္ေအာင္ရႉေပးပါ ပင္လယ္ထဲကဆားေငြ႕ေလရႉ သလိုမ်ိဳးအက်ိဳးခံစားရပါလိမ့္မယ္။ …
အခြေအနေတိုင်းမှာ ကိုယ့်အတွက် တပန်းသာစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ
အခြေအနေတိုင်းမှာ ကိုယ့်အတွက် တပန်းသာစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ ဂန္တဝင်စာပေစာရေးဆရာများသည် သူတို့၏ဇာတ်ကောင်များ၏ မျက်ခုံးနှင့် မျက်တောင် လှုပ်ရှားမှုများကို အာရုံစိုက်စေချင်သည်မှာ အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ တစ်ယောက်ဆီကနေ အခြားတစ်ယောက်ဆီကို သတင်းအချက်အလက်တွေဝေမျှခြင်း (၉၃) ရာခိုင်နှုန်းဟာ အသံနဲ့မဟုတ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။ အသံနဲ့မဟုတ်တဲ့ ဆက်သွယ်မှုမှာ body language သာမက ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေလည်း အကျုံးဝင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ တခြားလူတွေအပေါ် စကားလုံးတွေနဲ့မဟုတ်ဘဲ လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေပြောပြပေးသွားမှာပါ။ တစုံတယောက်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုရဖို့ အတွက် မျက်လုံးချင်းစုံအောင်ကြည့်ပြီး မျက်လုံးအရောင်ကို မြင်အောင်ကြည့်ပါ မိမိနဲ့မသိကျွမ်းသေတဲ့ လူတစ်ယောက်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ခု ကိုတည်ဆောက်ဖို့ အတွက် ဒီအချက်က ကူညီပေးလိမ့်မယ်။ သူတို့နဲ့ မျက်လုံးချင်းဆုံတဲ့အချိန်မှာ မျက်လုံးအရောင်ကို စစ်ဆေးဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲ။ …
တစ်ပွဲစားကြီး မောင်စံမှဲ့နှင့် သင်္ချိုင်းစောင့် မဖဲဝါတို့ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ ဇာတ်ကြောင်း ခေတ်ကာလကား ကုန်းဘောင်မင်းဆက် ၏ ခုနစ်ဆက်မြောက် ဘကြီးတော်မင်း (စစ်ကိုင်းမင်းသား) လက်ထက် တွင်ဖြစ်သည်။ မဖဲဝါ သည်ပြည်မြို့ ဇာတိဖြစ်ပြီးမွေးချင်း မှာမောင်နှမနှစ်ယောက်တည်း သာရှိသည်။အစ်ကိုဖြစ်သူ မောင်ကြံဆစ် သည်ပြည်မြို့စား ထံတွင် စာရေးတော်ကြီး အဖြစ်အမှုတော် ထမ်းလျှက်ရှိပြီး ဘွဲ့အမည်မှာ မင်းရဲဒိဗ္ဗဖြစ်သည်။မိဘနှစ်ပါးလုံး မရှေးမနှောင်း ကွယ်လွန်သွားပြီးနောက် အစ် ကိုဖြစ်သူမောင်ကြံဆစ်နှင့် အတူနေထိုင်လျှက် ရှိပြီး အစ်ကိုဖြစ်သူအား မိဘ သဖွယ်အားကိုးနေထိုင်ရရှာလေသည်။ အစ်ကိုဖြစ်သူမှာနှမအား ချစ်လွန်းသော်လည်းသောက်စား မူးယစ်တတ်ပြီး မကြာခဏ ဆိုသလိုခိုက်ရန်ဖြစ် ပွား တတ်လေ့ ရှိသည်။ မောင်ကြံဆစ် သည်သေ သောက်ခြင်းမှ အစပြုပြီး ခိုးသားဓါးမြများနှင့် လက်ပွန်းတစ်တီးနေထိုင် …
Previous 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 … 295 Next